अख्तियारको कार्यालय भवन उद्घाटन | eAdarsha.com
अख्तियारको कार्यालय भवन उद्घाटन
पोखरा । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको नवनिर्मित पोखरा कार्यालय उद्घाटन गरिएको छ । आइतबार आयोगका कार्यबाहक प्रमुख आयुक्त डा. गणेशराज जोशीले पोखराको मासबारस्थित कार्यालयका भवन उद्घाटन गरे ।
कार्यक्रममा डा. जोशीले सम्बन्धित निकायहरु जिम्मेवार र जवाफदेही भएमा विकास निर्माणका कार्य समयमै सम्पन्न हुने बताए । अख्तियार संघीय, प्रदेश र स्थानीय तिनै तहका सरकार तथा नागरिक समाजसँग सहकार्य गर्दै मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अघि बढ्ने बताए । यसो भएमा मात्र सुशासन प्रवद्र्धनमा सघाउ पुग्ने उनको भनाइ छ ।
१४ करोड ७२ लाख रुपैयाँ लागत अनुमान रहेको सो भवनको १२ करोड ८ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । ६ रोपनी जग्गामा फैलिएको सो भवन साढे २ वर्ष अवधिमा निर्माण कार्य सम्पन्न भएको हो ।